November 15, 2021 - Babal Khabar
Nov152021 by बबाल खबरNo Comments
भोलि नेपाल बन्दको घोषणा,सवारी साधन चल्नै नपाउने, पसलहरु के हुन्छ ? जानिराख्नुस
यो भिडियो हेर्नुस, काठमाडौँ : नेपाल कम्युनस्ट पार्टीले पेट्रोलियम, खाद्यान्नलगायत हरेक सामानमा सरकारले मूल्यवृद्धि गरेको विरोधमा भोलि मङ्गलबारका लागि आह्वान गरिएको नेपाल बन्दमा प्रेस, एम्बुलेन्सलगायत अस्पतालसम्बन्धी, कानुनव्यवसायी (आन्दोलन जारी रहेका कारण), कूटनीतिक नियोग र फोहोर बोक्नेबाहेक सबै गाडी बन्द हुने जनाएको छ । नेकपा केन्द्रीय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार नेपाल बन्दका क्रममा प्रेस, एम्बुलेन्सलगायत अस्पतालसम्बन्धी, आन्दोलन जारी रहेका कारण कानुनव्यवसायीले प्रयोग गरेका गाडी, कूटनीतिक नियोग र फोहोर बोक्ने गाडी मात्र चल्न दिइने र अरू सबै गाडी, संस्था, व्यवसाय, कार्यालय बन्द हुनेछन् । नेकपाले बन्दमा सहयोग गर्न महँगीको मारमा परेका र हालैको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले थलापरेका सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ । नेकपाले आइतबार उद्योगी, व्यवसायी, पेसाकर्मीका साथै सोमबार सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि ब
हातमा लगाइएको सुनले ल्याउँछ दुर्भाग्य, थाहा पाउनुस् सुनसँग जोडिएका यि १३ निकै रोचक कुरा
यो भिडियो, ज्योतिष शास्त्रका अनुसार प्रत्येक धातुले हामीमाथि प्रभाव पार्ने गर्दछ किनभने यो सबै सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहको खेल हो । हरेक धातुको एक विशेष ग्रहसँग सम्बन्ध हुन्छ । यी ग्रहले ती धातुलाई आफू अनुसार प्रभावित गर्ने गर्दछ ।तामा, चाँदी, सुन वा महँगा रत्न वा हिराले बनेको आभुषण, यी सबै कुराले कि त हामीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ वा यसले हामीमाथि नकारात्मक असर पनि पुर्याउने गर्दछ । तर यदि तपाईं सुन लगाएर आफ्नो जीवन सुखमय बनाउन चाहनुहुन्छ भने पंडित प्रफुल्ल भट्ट अनुसार थाहा पाउनुस् सुनका शुभ–अशुभ असर र यसको प्रयोग गर्ने तरिका बारे । खुट्टामा सुन नलगाउनुहोस्ःखुट्टामा सुनको बिच्छी वा पाउजु लगाउनु हुँदैन । सुनलाई खुट्टामा लगाउँदा दाम्पत्य जीवनमा समस्या आउन सक्छ र स्वास्थ्य पनि खराब हुनसक्छ । घरको यो दिशामा राख्नुहोस् सुनःकेही मानिसहरु सुन घरमा राख्छन् । त्यसकारण यदि तपाई
अनलाइन क्लास बाट शिक्षक र विद्यार्थीबीच बस्यो प्रेम त्यसपछी जे भयाे छक्क पर्नुहुनेछ हेर्नुस् ….
भिडियो, अनलाइन क्लास बाट शिक्षक र विद्यार्थीबीच बस्यो प्रेम भएपछि जे भयाे.., भनिन्छ संसार नै प्रेममा अडिएको छ तर कुन बेला कोसंग अनायास प्रेम बस्छ त्यसको पनि कुनै ठेगान हुँदैन । हालै भारतमा एउटा अनौठो घ-टना भएको छ । अनलाइन क्लासमा पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीबीच भएको प्रेम विवाहमा नै परिणत भएको छ । फिजिक्सको कोचिङ क्लास चलाउने रोहितले अन्लाइन क्लास लिँदै गर्दा बांकामा बस्ने काजललाई देखे पछि माया पलायो । भारतको बिहारमा रहेको भागलपुरमा एक शिक्षकले अन्लाइन क्लास पढाउँदा पढाउँदै विद्यार्थीसँग प्रेम गर्न थाले अनलाईन क्लास पछि उनीहरुबीच माया प्रेमका कुरा पनि हुन थाल्यो । जूम र ह्वाट्सयापमा चलेको अन्लाइन क्लासमा काजल पनि आइन् । पछिपछि रोहित र काजलको प्रेम बढ्दै गयो । अनि उनीहरूले भेटघाट गर्ने फैसला लिए । पढाउँदै जाँदा दुवैबीच प्रेम टुसायो र विवाहको कुरा आयो । रोहितले दाइजो नलिइकन अनि
भिडियो, संसारमा कहिले काँही निकै आश्चर्य पार्ने घट`ना हुन्छन्। जब श्रीमानको निधन भयो भनेर एकल जीवन विताइ`रहेकी महिलाको अगाडी २२ वर्ष पछि श्रीमान जोगी बनेर देखापरे`भने के होला ? एक महिलाको जीवनमा यस्तै भएको छ । घटना भारत झार`खंडको हो । २२ वर्ष अघि पतिको नि`धन भयो भनेर विधवा जीवन विताएकी महिलाको अगाडी अ`चानक श्रीमान जि`वीत भएर आए । २२ वर्ष पहिले पति नि`धन भएको मानेर एकल जीवन विताइ`रहेकी श्रीमती त्यती`बेला दंग परिन् जब उनका श्रीमान सारंगी बजाउँदै जोगीको भेषमा आइपुगे । गढ़वा जिल्ला कांडी प्रान्तको सेमौरा गांव निवा`सी उदय २२ वर्ष पहिले आफ्नो पैतृक घर छो`डेर गए। परिवारका सदस्यले उनलाई धेरै ठाउँमा खोजी गरे । तर उनको कतै पत्तो लावगेन । धेरै वर्ष पछि परि`वारका सदस्यलाई लाग्यो की उनी अब यो संसारमै छैनन् । त्यसपछि उनी`हरुले उदयको अन्तिम संस्का`र गरे । श्रीमती पनि विधवा बनेर बसिन् । छोर
भिडियो हेर्न तल थिच्नुस, सामाजिक सञ्जालमा कहिले के भाइरल हुन्छ थाहा हुन्न । यस्तै अहिले भेडाहरुको चर्चा छ, जुन भाइरल भै रहेको छ । इजरायलका लिअर पटेलले ड्रोनबाट खिचेको भेडाको बथानको भिडियो भाइरल भएको छ । उक्त टाइम ल्याप्स भिडियोलाई फेसबुकमा लाखौं पटक हेरिएको छ । दक्षिण इजरायलको पिस भ्याली योकनियामको फार्ममा रहेका भेडाको बथानको भिडियो खिचिएको हो । पटेलले हरेक पटक घुम्न जाँदा देखिन सकिने भेडाको बथानलाई माथिबाट कस्तो देखिएका भन्ने सोचसहित भिडियो बनाएको बताएका छन् । एकदमै ठूलो सङ्ख्यामा भेडाको बथान कहाँ र कति बेला हुन्छ भनेर उनले खोज्न थाले । र, सबैभन्दा धेरै जम्मा भएको बेलमा त्यहाँ १७ सय भेडा हुने उनले पत्ता लगाए र सोही समयमा उनले भिडियो खिच्ने सोच बनाए । अगाडिबाट खिच्दा सम्पूर्ण बथान छुटेर अर्को बाटो लाग्ने हुँदा भेडाको बाटो नछेक्नका लागि उनले माथिबाट भिडियो खिचेका थिए । आफूले
श्रीमानको गलामा फित्ता बाँधेर यसरी श्रीमतीले घुमाइरहेकी थिइन् कारण थाहा पाउदा सबै छक्क !
यो भिडियो हेर्नुस, ब्राजिलकी एक महिलाले आफ्ना श्रीमानलाई कुकु'रलाई झैं सडकमा घुमाइरहेको देखिइन् । यस्तो गरिरहेको तस्बिर सोसल मिडियामा सार्वजनिक भएपछि मानिसहरु चकित परे । महिलाले आफ्ना श्रीमानको घाँटीमा एउटा चेन लगाएकी थिइन् । यस्तो गर्नुको पछाडि उनले जे कारण दिइन् त्यो निकै रोचक छ । ‘डेली स्टार’ को रिपोर्ट अनुसार महिलाको नाम लुआना कजाकी र उनका श्रीमानको नाम आर्थर ओउर्सो हो । यी दुईलाई ब्राजिलको एक भीडभा'डयुक्त रेलवे स्टेशन र सडकमा फोटो खिचाइरहेको देखिए । फोटोमा देखिए अनुसार लुआनाले आफ्ना श्रीमान् आर्थरलाई कु'कुरलाई झैं व्यवहार गरिरहेकी छिन् । आर्थरको घाँटीमा एउटा चेन थियो जसलाई लुआनाले समातिरहेकी थिइन् । उनले आफ्ना श्रीमानलाई चेनको सहारामा घुमाइरहेकी थिइन् । आर्थरको अनुहारमा एउटा मुखौ'टा थियो । लुआना कजाकीका अनुसार उनीहरुले आफूबीच ‘प्रे'म र रो'मा'न्स’ बढाउनका लागि यस्तो गरेका थ
अब जौबाट नै मासु फालेपछि पशुव’ध गर्न नपर्ने !
भिडियो, एजेन्सी । झट्ट सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्छ । अचम्म नलागोस् पनि कसरी वनस्पतीबाट मासु फल्छ भन्दा । तर, सत्य सावित हुँदैछ, जौबाट नै मासु उत्पादन हुने र पशुव'ध गर्न नपर्ने । हो, आइसल्यान्डमा वैज्ञानिकहरूले एक प्रकारको कोषबाटै यो अचम्म लाग्ने कुरालाई सावित गर्दैछन् । यस कार्यले अब पर्यावरणलाई जोगाउन म'द्धत पुग्नेछ । पशुबाट लिइएको ‘ग्रो'थ फ्या'क्टर’ जौले बोक्न सक्नेगरी उक्त प्राटिन जौमा मिसाइन्छ र फलेको जौ पिसिन्छ अनि प्रयोगशालामा मासु प्रशो'धन गर्न सुरु गरिन्छ । यसरी थोरै ठाउँबाटै जौबाट मासु उत्पादन भएपछि मासु उत्पादनका लागि पशुलाई चाहिने जति जमिनको आवश्यक पनि नपर्ने बीबीसीले जनाएको छ । र, प्रविधिकाे सहायताले सजिलै प्रयो'गशालामा पशुपंक्षीबिनै जौबाट मा'सु उत्पादन सुरु हुनेछ । अहिले आइसल्यान्डमा वैज्ञानिकहरू वनस्पतिबाट मासु उत्पादन गर्न एक लाखभन्दा बढी वंशा'णु परिवर्तन
यो भिडियो हेर्नुस, भारतको एक अदालतले दिएको फैसलाले सबैलाई हैरान बनाएको छ । इलाहाबाद उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ कि बच्चाको बुबा को हो भनेर प्रमाणित गर्न डीएनए परीक्षण सबैभन्दा मान्य र वैज्ञानिक तरीका हो । डीएनए परीक्षणले श्रीमतीको सच्चाई प्रमाणित गर्न सक्दछ । यसबाट यो प्रमाणित हुन सक्छ कि पत्नी बेइ’मान, व्य’भिचा’री वा बे’वफा’ई हुन कि होईनन् ? हामी तपाईंलाई जानकारी गराउन चाहान्छौँ कि एक जना व्यक्तिले आफ्नी स्वास्नीसँग सम्बन्धविच्छेदको लागि निवेदन दिएका थिए । यसमा यो कुरा पत्ता लागेको छ कि यदि अदालतले श्रीमानका लागि हिन्दू विवाह ऐन १९५५ को धारा १३ अन्तर्गत पतिको तर्फबाट दायर गरेको सम्बन्धविच्छेद याचिकामा व्यभिचारको आधारमा पत्नीलाई डीएनए टेस्ट गराउन निर्देशन दिन सक्दछ भनेको छ । अर्कोतिर यदि पत्नीले डीएनए परीक्षण गराउने छनौट स्वीकारिन् भने, के डीएनए परीक्षणको निष्कर्ष वा न
यो भिडियो हेर्नुस, ग’र्भवती महिलाले स्वास्थ्यको निकै ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ। जसमध्ये वास्तुमा बताइएका केही बस्नु उनीहरुका लागि बरदान बन्न सक्छन्। वास्तुका अनुसार यदी कुनै महिलाले कुनै खास चीज कोठामा राख्दा महिला र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा राम्रो असर पर्ने र बच्चा गुणवान हुने गर्दछन्। मयूरको प्वाख-मयूरको प्वाख कृष्णसँग सम्बन्धीत हुने गर्दछ। त्यसैले यसलाई घरको मन्दिर वा ग’र्भवती महिलाले कोठामा राख्दा आमा र बच्चाका लागि निकै राम्रो मानिन्छ। पहेलो चामल-पहेलो चामलले शुभ शंकेत बताउने गर्दछ। त्यसैले गर्भवती महिलाले कोठामा पहेलो चामल राख्दा आमा र बच्चामा कुनै किसिमको नकारात्मक उर्जा नपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। भगवान कृष्ण र देवी यशोदाको तस्वीर-गर्भवती महिलाले कोठामा भगवान कृष्ण र देवी यशोदाको तस्वीर लगाउनु शुभ मानिन्छ। यसरी लगाएको तस्वीर विहान उठ्ने वित्तिकै देखियो भने सकारात्मक उर